FLV Free in MPEG Converter: Beddelaan FLV in MPEG ugu fudud
> Resource > Free > Top 5 Free FLV in MPEG Converter
Ma waxaad doonaya in loogu badalo files FLV si aad u qaab file MPEG? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah codsiyada oo loo isticmaali karo si loo gaaro tan ku ool ah. Yeellay The in tani ay tahay in codsiyo kuwaas oo si dhab ah oo lacag la'aan ah oo ay soo saaraan wax soo saarka oo tayo leh. Codsiga hore ee noo liiska yahay
Tani waa codsi free Video Converter fiican ah. Waxaa loo sameeyey labada daaqadaha iyo nidaamka ka hawlgala MAC. Iyadoo codsigan, aad hubto in qaab file video qalad aad habeen ma burburisay doonaa. Diinta ka mid ah qaab files sokow, codsiga tani waxay u oggolaanaysaa gubashada ee files Converter in DVD. Waxaa badasha in ka badan 25 jeer ka dhakhsi badan converters caadiga ah, oo taageeraya in ka badan 140 qaabab file. Sidoo kale arjigaan users waxay bixisaa fursad u samaynta goobaha in optimizes files wax soo saarka ee iPhone, iPad iyo qalabka kale ee mobile.
Tani waa codsi si xor ah ku salaysan daaqadaha in la sameeyo qaab beddelidda ee FLV qaab file video inay qaab file MPEG. Si kastaba ha ahaatee, ka shaqeynayaan ee codsigan kuma koobna this. Waxa kale oo ay diinta MP4, 3GP, Mpg, AVI, wmv iyo qaabab file Jabbuuti. Codsiga waxaa kaloo loo isticmaali karaa in lagu dooxi DVD files si video iyo dooxi files audio ka CD.
Functionalities kale ee Converter bilaash ah waa in lagu dhiso karo files dhaawacan, iyaga oo dayactiraya in xaalad playable. Waxaa qaniinaa size faylka, iyaga oo yar yar oo ay taageerto in ka badan 60 luuqadood.
Tani waa MAC ku salaysan software ah diinta in badan oo ka dhaqso badan QuickTime Pro. Waa ay fududahay in la isticmaalo sida ay taageerto feature jiita iyo dhibicda. Waxaad dooran kartaa baaxadda file saarka ka size shaashadda TV ama iPod ah. The New version 1.5.2 ee iSquint uu leeyahay qaabab cusub oo gaar ah sida mid noqoshada ee "Debreaker". Tani waxay u ogolaaneysaa files dhaawacan in la cusboonaysiiyey iyo replayed. Wixii files yar in ciyaaro si dhakhso ah, waxa ay mar dambe qaaday in ay baadi.
Tani waxaa ku jira in badan oo software si xor ah u dejisan. Kuwaas oo isugu jira FLV in MPEG Converter, YouTube in Converter DVD, Video in MP3 Converter iyo FLV ah in Converter MPEG. Kuwaas oo dhammu waa codsiyada lacag la'aan ah in ay yihiin kale oo weyn oo ay kuwa bixisay. Converter video Tani waa lagu kalsoonaan karo oo ammaan ah, oo ku haboon qaab beddelidda ee video iyo files audio iyo guba in CD.
Free online video Converter (Converter Online)
Tani waa video Converter internetka ku salaysan. Ma jirto baahi ah ee xamuulka hoos iyo ma xaqiijin email. The fudayd iyo sahlo isticmaalka codsigan waa doorasho la doonayo dhigaysa. Weli wanaagsan, sidoo kale waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan.
Marka xiga ee aad u baahan tahay codsi u beddelidda ee FLV in qaab file MPEG, noqon intiisa kale xaqiijiyay in kuwan files kor ku xusan la kulmi doona baahidaada. Waxay yihiin oo lacag la'aan ah, ay ku jiraan lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh. Ka faa'iidayso iyaga ka mid ah maanta.